Sida loo dhaho habeen wanaagsan Jarmalka
Maxay ka dhigan tahay habeen wanaagsan Jarmal, sidee u dhahdaa habeen wanaagsan Jarmal? Saaxiibbada qaaliga ah, aan baranno inaan sheegno weedhaha salaanta iyo rabitaanka wanaagsan, kuwaas oo ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee saaxiibbada hadda bilaabaya barashada Jarmalka, sida ku cad waqtiga maalinta. Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa erayo ay ka mid yihiin subax wanaagsan, galab wanaagsan, fiid wanaagsan, habeen wanaagsan oo Jarmal ah.
Ku dhaha habeen wanaagsan Jarmalka waxaa lagu tilmaamaa “Gute Nacht”. Maaddaama erayga Nacht uu yahay magac macnihiisu yahay habeen, xarafkiisa waa xaraf weyn. Waxaan horay u sheegnay in xarafyada magacyada Jarmalka xaraf weyn lagu samayn doono. Qaababka salaan marka loo eego waqtiga maalinta waa sida soo socota.
galab wanaagsan (galab wanaagsan)
(vi: ge: t irbad)
Erayada salaan marka loo eego wakhtiga maalinta ee Jarmalku waa sida kor ku xusan. Waxaan kuu rajaynaynaa wanaagga casharradaada Jarmalka.